Fifa Oo Diiday Inay Wax Ka Bedesho Saacadaha Ay Bilaabanayaan Ciyaaraha Koobka Aduunku
HomeWararka MaantaFifa Oo Diiday Inay Wax Ka Bedesho Saacadaha Ay Bilaabanayaan Ciyaaraha Koobka Aduunku
Xidhiidhka kubada cagta ee Aduunka, Fifa ayaa ka hor yimid codsiga dalabyada lagu doonayo in wax ka bedel lagu sameeyo saacadaha ay bilaabanayaan qaar kamid ah ciyaaraha aduunku, kuwaas oo laga digayo inay halis ku yihiin ciyaaryahanada safanaya caafimaadkooda.
Wakhti oo aad u kulul, iyadoo xagaa ay tahay , hawaduna taagan tahay , ururka ciyaaryahanada Brazil ku bahoobeen ee magaciisa loo soo gaabiyo (Fenapaf) ayaa ka codsaday FIFA in saacada 1:00 duhurnimo ah ee wakhtiga Brazil ee qaar kamid ah kulamada koobka aduunku bilaab mayaan , wax ka bedel lagu sameeyo si looga hortago mushkilad la soo darista ciyaaryahanada ciyaarahaas wakhtiga adag bilaabanaya ka qayb.
Todobaadkan aynu ku jirno dhexdiisa, ururka isutaga ciyaaryahanada ayaa gudbiyey gal dacwadeed, Fifa ku qasbaya bedelka saacadaha 24 kulan oo kamid ah koobka aduunka, kuwaas oo bilaabanaya 1:00 duhurnimo ee saacada Brazil, iyagoo ku doodaya in culayska hawada iyo huurka wakhtigaas jira ka jira magaalooyinka qaar ay halis ku keeni karaan nolosha ciyaaryahano badan.
Fenapaf waxay ku adkaysteen in ugu yaraan laba daqiiqo oo biyo cabid iyo isku rushayn ah la siiyo ciyaaryahanada, badhtamaha qayb kasta oo kamid ah labada qaybood ee ciyaartu u qaybsan tahay ( 2 half ).
Si kastaba ha ahaatee, Fifa ayaa ka hor timid in wax is bedel ah lagu sameeyo saacadaha ay bilaabanayaan ciyaaraha koobka aduunka ee bisha inagu soo foolka leh ka furmaya wadanka Brazil.
“Kooxda caafimaadka ee Fifa ayaa mar kasta u kormeeri doona si taxadar ku jiro garoomada oo dhan inta tartanku socdo, si loo ilaaliyo caafimaadka ciyaaryahanada,” Ayuu xidhiidhka kubada cagta caalamku ku yidhi warsaxaafadeed uu soo saaray.
“Wakhti yar oo nasasho ah oo ciyaaryahanadu isku qaboojin doonaan , ayaa loo tixgallin doonaa ciyaariba ciyaartay ka dambeyso 64 ka kulan ee tartanku ka kooban yahay. Si rasmi ah ama xiliyo toos ah oo loo baxo wahtigaas nasashada ah looma shaacinayo hadda, xaaladaha cimilo ayaa loo eegi doonaa ka hor bilowga ciyaar kasta, taas oo uu qiimayn doono sarkaalka caafimaadka ugu qaabilsan Fifa ee garoonkaas ku qoran.
“Garoomada kulaylka saadaasha hawadiisu aadka u kulushahay sida kuwa magaalooyinka Manaus, Cuiaba iyo Fortaleza ma jiraan ciyaaro bilaabmi doona saacada 13:00 inta lagu jiro marxalada groups ka.”
Halkan Ka Ogow Saacadaha Geeska Afrika Ee La Daawan Doono Kulamadda Koobka EURO 2016
Owen : Ronaldo waa laacibkii ugu weynaa ee Real Madrid ka ciyaara
Laacib Wacdaro Ka Dhigi Jiray Premier League Imikana Jillidda Filimada Abaal Marinaha Ugu Qaalisan Ku Mutaystay